Nhau - Mukufunga kwakakurumbira, magirazi ezuva ari "chishongedzo chezhizha", asi iwe waizviziva?
Mune maonero akakurumbira, magirazi ezuva ari "chishongedzo chezhizha", asi iwe waizviziva?
Mune maonero akakurumbira, magirazi ezuva ari "zvishongedzo zvezhizha", asi iwe waizviziva? Ultraviolet mwaranzi munguva yechando inokuvadzawo kumeso. Kunyangwe pazuva rine makore, UVA uye UVB zvicharamba zvichisvika kumeso ako. Muchokwadi, maziso edu akasimba uye haana kusimba munguva yechando. Kune rimwe divi, nekuda kwemhepo, hunyoro hwakadzika, uye mhepo isina kugadzikana munguva yechando; kune rimwe divi, nzira yemugwagwa inotonhora munguva yechando, iyo inozoburitsa inopenya inoratidzirwa nechiedza pasi pechiedza chezuva. Naizvozvo, kunyangwe mumatsutso uye munguva yechando, magirazi ezuva haagoni kuve mashoma. Zvidzidzo zvakaratidza kuti chando chinogona kuratidza 85% yezuva re ultraviolet mwaranzi. Ichi chikamu cheiyo ultraviolet mwaranzi inogona kukonzera corneal kupisa kwezuva uye "chando kupofumadza". Kupofumadza kwechando kunozokuita kuti urasike kuona kwako kwenguva pfupi, uye maitiro acho achakuunzira marwadzo. Kupfeka magirazi ezuva ndiyo nzira yakanakisa yekudzivirira izvi. Sarudza yakashongedzwa, isina kureruka magirazi ezuva asina kushushikana kana iwe ukapfeka iwo zuva rese.
Wagadzirira kuchengetedza maziso ako? Wobva watarisa kune magirazi ezuva atakakuzivisa iwe.
Iyo Square Freyimu yakafukidza mumvuri magirazi ezuva ndiyo 2020 nyowani mafashoni. Akasimudzwa maforamu anozivikanwa gore rino. Dhizaini yayo yakafanana neye ski goggles, ine Ultra-yakafara mafuremu kuratidza hukuru hwakasimba.
Kana iri yekufunga kwemaviri egirazi rekupinda-risingasviki zvakanyanya, sarudzo yekutanga inofanira kunge iri nostalgic classic maitiro. Nekuti iyo furemu ukobvu iri pakati nepakati, chimiro chakakosha, zviri nyore kusarudza kumeso, uye hachisati chiri cheyakagara chakagadzirwa dhizaini, zvakasununguka zviri nyore kudzora uye kuenzanisa. Kudzoka kweiyo Oversize dhizaini fashoni kune fashoni nyika iri chaizvo nekuda kwegucci. Mumwaka wapfuura, pane iyo gucci flyover, varume nevakadzi mamodheru vakapfeka peya yeOversize simbi fashoni masitayera, ine yakasimba retro vara, uye exudes wefashoni wechidiki. mweya. Nekuti iyo Oversize dhizaini furemu inogona kufukidza mazhinji echiso, it zvakasununguka ine simba guru kumeso. Magirazi anogona zvakare kuve akanaka kwazvo. Iko kunogara kune imwe furemu yemhando dzakasiyana siyana dzinoenderana newe zvakanyanya ~